အခုတလော Cardi B တစ်ယောက် လူငယ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး hot ဖြစ်နေပါတယ်။ လူမဲအမျိုးသမီးတွေထဲက အောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပေမယ့်လည်း သူမရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ တာဝန်ကျေလွန်းပြီး ဂရုတစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ရှားပါးလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီး Rap အဆိုတော်တွေကြားမှာ အကြမ်းစား အလန်းစား Rap စာသားတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။
ဒီလိုကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပြန်ရခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူရလောက်တဲ့ထိ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး Billboard Hot 100 မှာ New peak အနေနဲ့ နံပါတ် ၇ နေရာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး အရင်ရက်တွေထက် အဆင့်ကျသွားခြင်းမရှိဘဲ အဆင့် ၁၉ ကနေ တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ‘ I LIKE IT ‘ သီချင်းဟာဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လ လောက်က audio ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Official Music video ထွက်တာတော့ ၁ ပတ်လောက်ဘဲရှိပါသေးတယ်။ MTV မှာလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတာတောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ လူစိတ်ဝင်စားအောင် ကြိုးစားထားပုံမှာ ပေါ်လွင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ instagram မှာတော့ အခုလို Top 10 ဝင်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
I’m soooooo happy ,I’m so proud of myself .I feel like crying !!!! we back on the top 10 baby #7!!!!……I must celebrate ????? Sparkling apple cider anyone ? Thank you BardiGANG AND THANKS TOO EVERYONE !!! LAAA MASSSS PERRRAAAAAAAAA!!!
A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Jun 4, 2018 at 10:33am PDT
Bro i will fucking Die if i get another #1 !! Just thinking about it makes me want to cry ?Either way I’m happy with the success the record is having .So grateful for ya for supporting me !Make sure ya check out I LIKE IT on your favorite music service !!! INVASION OF PRIVACY ??????
A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Jun 5, 2018 at 8:13pm PDT
Music NewsBillboard Musiccardi bCelebrityHip-Hop / RapVideo
PREVIOUS POST Previous post: Orlando Bloom နဲ့ ပြန်တွဲနေပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ Katy Perry
NEXT POST Next post: Justin Bieber နဲ့ Baskin Champion တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဟာ အေးစက်နေခဲ့ပြီလား…?